Hoogganoonni NATO Haala Afgaanistan Keessaaf Qeeqaman
Hagayya 23, 2021
Suuraa paarlaamaa Yunaatid Kingdam irraa argamee fi yeroo bakka buutonnii muumicha ministiraatti haasahan agarsiisu, Hagayya 18, 2021 (Roger Harris/ UK Parliament/AFP)
Haleellaa Talibaan kan hatattamaa karaa dogoggora ta’een tilmaamuuf kan qeeqame angawoota Yunaayitid Isteetis qofaa miti. Prezidaant Joo Baayiden humnootii Ameerikaa biyyattii Eesiyaa Waaltaa keessaa baasuuf erga murteessanii booda, hoogganoonni Awrooppaa fi gorsitoonni isaanii naga eegumsaa, haalli Afgaanistaan keessaa attamiin ariifatanii akka adeemaa jiran ilaalchisee kara dogoggoraan ilaaluu isaaniif akkaan qeeqamaa jiru.
Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsenii fi ministeeronni isaanii gameeyyiin , loltoonni Yunaayitid Isteetisii fi ikan NATO gamasii ennaa ba’aa turanitti Taliban tarkaanfii utuu hin fudhatin dura karoora gamasii baasuuf qophaa’uu dhabuu isaaniif seera tumtoota paartii ofii akkasumas momitoota siyaasaatiin qeeqamanii jiru.
Baatii Waxabajjii darbee loltoota ishee 570 ta’an Afgaanistaan keessaa kan Baaste Jarmanii keessaas mootummaan Chansilarittii Angela Merkel, Kaabul harka Talibaanitti kufuu ishee dura, lammiiwwan Afgaanistaan kanneen Jarmanii waliin hojjetaa turaniif karoora gamasii ba’uu xumuruu dhabuu isaaf qeeqi hamaan irra ga’ee jira.
Gamasii ba’uuf karoora jiru xumuruu dhabuun tilamaama sirii hin taane kan haleellaa hatattamaa Talibaan geggeesse akkasumas mootummaan Afgaanistaanii aangoo gad dhiisuu ilaalchisee Washington illee tilmaama dogoggoraa tilmaamee jira. Akkuma gitoota isaanii kan Ameerikaa, dhaaboliin basaasaa Awrooppaa fi dhaaboliin naga eegumsaa yeroo ga’aa qabna jechuun yaadanii turan.
Gimbii, Dambi Doolloo fi Gaambeellaa Keessatti Riphee-loltoonnii fi Humnoonni Mootummaa Walitti Dhukaasuun Himame
Prezidaantiin Bulchiinsa Naannoo Tigraay Waa’ee Marii Nageenyaa Irratti Ibsa Kennan
KFO’n Ajjeechaan Gambeellaa fi Bakkawwan Birootti Geggeessame Akka Qaama Walabaan Qoratamu Gaafate
Godinaa Wallaggaa Lixaa, Aanaa Gimbii Keessatti Jiraattonni Hedduun Ajjeesamuun Himame
Gimbii, Dambi Doolloo fi Gambeellaatti Har’a Nagaan Deebi’uun Himame
Finfinneetti Gaazexeessaan Torban Dabre Hiikamee Ture Deebi’ee Qabame
Raayyan Ittisa Itiyoophiyaa Ajjeechaa Loltootaa Sudaan Keesaa Harka Hin Qabu Jedhe
Manni-murtii Har’a Dhimma Gaazzexeessota ONN Lameenii fi Kanneen Biroo Kudha Shanii Ilaale
Guutummaan Itiyoophiyaa Rooba Gannaa Argachuuf Jira Jedha Dhaabbatni Meetriyooloojii Biyyattii
Rakkoo Kaaba Itiyoophiyaa Jiru Furuudhaaf Gurmuun Araarteessotaa Mootummaa Federaalaatiin Ramadame
Wallaggaa Dhiyaa Keessatti Lakkoobsii Namoota Ajjefamanii Dabalaa Jira:Waldaa Amaaraa Amerikaa Keessaa